Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-elekọta bọl Marcelo Bielsa Akụkọ Nwatakịrị Ntinye Uzo akụkọ Nkọwapụta Untold
Ihe omuma anyi nke Marcelo Bielsa na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ndị nne na nna, ndị ezinụlọ, Nwunye, Childrenmụaka, Ndụ, Ndụ Nke Onwe na Net Net.
Na nkenke, anyị na-egosipụta akụkọ ihe mere eme nke onye njikwa bọọlụ ọkachamara nke Argentina. Lifebogger malitere site na nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Iji mee ka ị nụ ụtọ ọdịdị Marcelo Bielsa's Bio, nke a bụ nchịkọta ihe osise nke ndụ ya.
Ndụ na ebili na Marcelo Bielsa.
Dị ka ndị na-agba bọl, gị na gị maara na ọ bụ otu n'ime ndị njikwa kachasị asọpụrụ na akụkọ ntolite football.
Agbanyeghị, ọ bụghị ọtụtụ (gụnyere gị) emeela ikpe ziri ezi na akụkọ ndụ Marcelo Bielsa nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a, na-ebuteghị oge ọzọ, ka anyị malite ndụ nwata ya.
Cemụaka Marcelo Bielsa Akụkọ nke:
Maka ndị na-ebido ebido, a na-etu onye njikwa bọọlụ "EL Loco". Marcelo Alberto Bielsa Caldera A mụrụ na 21st ụbọchị nke July 1955 na nne ya, Lidia Caldera na nna, Rafael Pedro Bielsa n'obodo Rosario na Argentina. Ọ bụ otu n'ime ụmụ atọ amụrụ site na mmekọrịta dị mma n'etiti nne na nna ya.
Marcelo Bielsa Na-etolite Afọ:
Nwa okorobịa "El Loco", dị ka a na-akpọkarị ya, toro na Rosario na ụmụnne ya- nwanne nwoke nwoke tọrọ ya bụ Rafael na nwanne nwanyị aha ya bụ María Eugenia.
N'ịbụ onye nọrọ afọ mbụ ya n'obodo ahụ, Bielsa na-eto eto bụ nwa na-amụsi ihe ike nke nwere ikike ịgụ akwụkwọ otu ụbọchị.
Ka ọ na-etolite, agụụ Marcelo Bielsa maka akwụkwọ ji nwayọ na-emetụta ihe karịrị akwụkwọ akụkọ 40 nke ọ na-enweta ndenye aha maka.
Ezigbo Ezinụlọ Marcelo Bielsa:
Nwa okorobịa ahụ nwetara mmasị ya maka ịgụ ihe site n'aka nna nna ya bụ onye kwuru na ya nwere akwụkwọ 30,000 na ọbá akwụkwọ nke aka ya. N'aka nke ha, ndị nne na nna Marcelo Bielsa nwere obi ụtọ ịkwado ọchịchọ mbụ ya maka ihe ọmụma na mmasị na egwuregwu maka ọtụtụ ihe.
Otu ihe kpatara ya bụ na nne na nna Marcelo Bielsa nwere ezigbo ọrụ. Onye njikwa bọọlụ si n’ezi ụlọ ebe nne ya bụ onye nkuzi na nna ya bụ onye ọkaiwu.
Ọ kwụsịghị ebe ahụ… Ma nna ma mama nwụrụ anwụ-ike Fans nke otu ọgbakọ Rosario Central.
Maka ndị na-amaghị, onye nchịkwa bụ nwa amaala bonafide nke Argentina. Nsonaazụ nyocha emere iji chọpụta ezinụlọ Marcelo Bielsa na-egosi na ọ bụ agbụrụ ọcha nke Argentina.
Dị ka a hụrụ, agbụrụ a na-achịkwa mpaghara ọwụwa anyanwụ nke mba ahụ.
Nwa amaala Rosario bụ onye agbụrụ ọcha kachasị.
Marcelo Bielsa Football Akụkọ:
N'ịbụ onye a mụrụ n'ezinụlọ nwere ọgaranya akụkọ ihe mere eme na Iwu na Ndọrọ Ndọrọ Ọchịchị, nwa "El Loco" mere mkpebi ịmebi ọdịnala.
Iji mezuo nke ahụ, ọ raara ndụ ya nye football. Nwatakịrị ahụ malitere igwu egwuregwu ahụ site na mgbe ọ dị obere wee sonye na ya mgbe ọ dị afọ 15 (1970) mgbe ọ malitere ọzụzụ na klọb Newell Old Boy.
Ọrụ football na-ada:
Mgbe ọ nọ na Newell Old Boys, Bielsa gbalịsiri ike ka ọ bilie site na klọb n'ihi na ọ bụghị onye ọkpụkpọ egwu.
Ọ bụ ezie na ndị ịgba egwu bọọlụ gbakọtara wee bụrụ ndị otu klọb, ọ nweghị ike ịkwado onwe ya na ya. N'ihi ya, ọ hapụrụ ụlọ ọrụ ahụ na 1978 wee gbadaa site na egwuregwu.
Echiche a na-adịghị ahụkebe nke ndị ịgba ọsọ ụkwụ na Newell Old Boys.
Marcelo Bielsa Afọ Mbụ na Nchịkwa:
N'oge na-adịghị anya, ndị na-eto eto na-eto eto kwụsịrị ịgba bọl ma mee mkpebi nke ịbanye n'ime nchịkwa.
Ọ malitere ọrụ nkuzi ya na 1980 dị ka onye isi nchịkwa nke Newell's Old Boys School's Youth Division. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ gara n'ihu ijikwa ọtụtụ klọb football n'afọ iri na-abịanụ.
Nke a bụ echiche nke ya dị ka onye nchịkwa nke Newell Old Boys- Twimg.
Klọb ndị ahụ gụnyere ndị otu egwuregwu Mexico bụ Atlas FC 1993—1995 na Club America 1995—1996. Nlekọta nlekọta na-esote na-ahụ Bielsa nchịkwa Argentine n'akụkụ - Club Atlético Vélez Sarsfield 1997-1998 na ụlọ Spanish - RCD Espanyol na 1998.
Marcelo Bielsa Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Oge mgbanwe nke ọrụ onye ọrụ bịara na 2004 mgbe ọ hụrụ ka ndị otu mba nke Argentina meriri Gold n'oge 2004 Olympics.
Na mmeri a, Argentina ghọrọ ndị egwuregwu Latin America mbụ iji nweta mmeri n'egwuregwu Olympic na football kemgbe 1928.
Hụ onye dugara Argentina na nrite ọla edo na 2004 Olympics- Nkeji Media.
Bielsa gara n'ihu na-elekọta mba nke Chile ma mee nke ọma iji nweta ọkwa dị ka dike iji meziwanye ọrụ otu ahụ.
Ndị ama ama na ndozi dị otu a bụ ntozu Chile maka iko mba ụwa nke 2010. Agbanyeghị, ha agabigaghị agba nke 16. Enweghị ekele maka mmeri si Brazil.
Marcelo Bielsa Bio - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Mgbe onye nchịkwa na-ebili ngwa ngwa were ọrụ nke ijikwa klọb Spanish, Athletic Bilbao na 2011, ọtụtụ na-achọsi ike ịhụ ma ọ ga-eme ihe ịga nke ọma ya na ndị otu mba na asọmpi egwuregwu.
O juru ha anya, Bielsa hụrụ na ọgbakọ Spanish ruo na njedebe nke UEFA Europa Njikọ na Copa Del Rey n'oge mbụ ya. Ma Bielsa enweghị ọdịda na ijikwa Marseille, Lazio na Lille n'etiti 2004-2007.
Isi ihe ịga nke ọma:
N'elu ọnụ ọgụgụ ọrụ ya nke ọma, Bielsa weghaara njikwa nke Leeds United Championship na 2018 wee duru ha kwalite Premier League na 2020.
Ihe ngosi a bu ihe ngosi puru iche n’ihi na ndi otu ahu juputara na mmerụ ahu na nkwalite bu Leeds nrịgo mbu na afọ 16!
Uzo obula uzo di nma maka Bielsa na Premier League, ndi ozo dika ha gha abu akuko.
Banyere Marcelo Bielsa Nwunye:
N'azụ onye njikwa ọ bụla na-aga nke ọma bụ nwanyị na profaịlụ anyị nwere mmasị na-adịghị na ngalaba ahụ. Marcelo Bielsa ka ya na nwunye ya Laura Bracalenti nọ na mmekọrịta alụmdi na nwunye kemgbe afọ 30. Laura bụ onye na-ese ụkpụrụ ụlọ akwụkwọ na agụmakwụkwọ na National University of Rosario.
Ọ bụ onye ama ama na ngalaba agụmakwụkwọ ma nwee ọtụtụ mbipụta n'aha ya. Bielsa na Laura nwere ụmụ nwanyị abụọ. Ha gụnyere Ines na Mercedes.
Inés nwere mmasị na egwuregwu karịsịa hockey. N'aka nke ọzọ, ọ bụghị ọtụtụ ederede banyere Mercedes bụ onye buru ibu na-edebe ndụ onwe ya dị ka ndị ọzọ nọ n'ezinụlọ Bielsa.
Zute ada Marcelo Bielsa, bụ Ines- Laverda.
Ndụ Marcelo Bielsa:
Ezinụlọ ndị South America na-enwe obi ụtọ iji mpako mata na ọfụma ha na-aga nke ọma. Ikpe a adịghị iche na nne na nna Marcelo Bielsa, ụmụnne ya na ndị ikwu ya. Ugbu a ka anyị webata nna ya.
Banyere Marcelo Bielsa Nna:
Nke mbụ, nna nchịkwa Rafael Pedro bụ onye ọka iwu na onye hụrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na football n'anya. N'ịbụ onye na-akwado Rosario Central, ọ naghị enwe obi ụtọ na Bielsa ghọrọ onye na-egwu egwuregwu maka Newell Old Boys na-ama egwuregwu na ọbụnadị na-azụ otu klọb ahụ.
Rumor nwere na Rafael ahụbeghị mgbe Bielsa na-egwu egwuregwu ma na-enye ndị otu egwuregwu maka asọmpi ahụ. Ebe ha na esemokwu a, ma nna ma nwa ha nwere ezigbo ezi ulo ma ha ekwuteghịkwa okwu gbasara ibe ha.
Banyere Marcelo Bielsa mama:
Ndị nne na-aga nke ọma amụọla ndị nkuzi akụkọ na Lidia Caldera abụghị otu. Ezigbo nne nchịkwa ahụ nwere akụkọ ihe mere eme na ngalaba mmụta nke Argentine dị ka onye nkụzi na-arụsi ọrụ ike.
Ka a sịkwa ihe mere, Bielsa kwetara n'otu oge na ụkpụrụ omume ya dị ịtụnanya bụ àgwà o ketara n'aka nne ya. N'okwu ya;
"Nye ya, mgbalị ọ bụla ezughị," ka ọ ga-emesị kweta. Mmetụta mama m nwere bụ ihe dị mkpa ná ndụ m. ”
Njikọ ezinụlọ adịghị akwụsị n'ebe ahụ, Marcelo Bielsa na-ekwupụtakwa mym maka ịzụta ya mbipụta nke egwuregwu egwuregwu Argentina El Grafico nke ọ ga-eripịa ozugbo, mmepe nke nyeere ya aka ịbụ onye na-eche echiche.
Ọ na-aga n'ekwughị na ndị nne na nna Marcelo Bielsa mere ọtụtụ ihe iji nyere ya aka ịghọ onye ọ bụ.
Banyere ụmụnne Marcelo Bielsa:
Onye nchịkwa ahụ nwere ụmụnne nwere mmetụta, nwanne ya nwoke tọrọ na nwanne nwanyị. Nwanne Marcelo Bielsa Rafael nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma jee ozi dị ka onye ozi nke mmekọrịta mba ofesi n'okpuru onye isi ala Argentina Nestor Kirchner.
N'aka nke ọzọ, nwanne nwanne Marcelo Bielsa nwanne Rafael bụ onye na-ese ụkpụrụ ụlọ yana nọkwa na ndọrọndọrọ ọchịchị dịka ọ na-eje ozi dị ka osote gọvanọ Santa Fe.
Zute nwanne Marcelo Bielsa, Maria Eugenia- Profaịlụ
Banyere ndị Marcelo Bielsa:
N'ịga n'ihu na ndụ ezinụlọ onye njikwa, enweghị ndekọ ọ bụla banyere nna nna ya. Data banyere nne na nna ya ochie, yana nne nne na nne nne ya, dị ụkọ.
N'otu aka ahụ, enweghi ọtụtụ ihe banyere ndị nne na nna ya, nwanne nne ya, ụmụ nwanne nne ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya.
Gịnị ka Marcelo Bielsa na-eme n'èzí Football?
Ka anyị gaa n’ihu n’àgwà nke onye njikwa ahụ. You maara na ha yiri nke ndị amụrụ n'okpuru ọrịa zodiac cancer?
Ha gụnyere ike ya maka asọmpi na enweghị ntụkwasị obi. Na mgbakwunye, o nwere onye na-ekwusi okwu ike ma gosipụta ịdị ọcha.
Kedu ihe ọzọ? Bielsa na-a attentiona ntị na nkọwa, ọ na-esighikwa ekpughe nkọwa banyere ndụ onwe ya na nke onwe ya.
Banyere ọdịmma na ihe omume nke onye njikwa ahụ, o nwere ọtụtụ ihe omume oge gụnyere gụnyere ịgagharị, ịzụ ahịa, ịse foto na ndị fan, ịgụ na iso ezi na ụlọ ya nọrịa.
Shoppingzụ ahịa bụ otu n'ime ihe omume egwu kachasị amasị ya- Thesun.
Net Worth na Web Marcelo Bielsa:
N'ebe a, anyị na-ejegharị gị otu onye njikwa bọọlụ si eme ya ma na-emefu ego ya. You maara na Marcelo Bielsa nwere ọnụọgụ ego ruru ihe karịrị $ 1 ​​nde n'oge edere?
Njikwa akụ na-arịwanye elu nke njikwa ahụ nwere isi mmalite ndị akwụ ụgwọ na ụgwọ na ụgwọ ọ na-enweta maka ịbụ onye njikwa bọọlụ.
Agbanyeghị, Bielsa na-ebi ndu ndụ mgbanwe nke na-eme ka o sie ike ịgbaso usoro mmefu ya.
N'ihi ya, enwere ntakịrị ihe banyere ụlọ ndị o nwere. A pụkwara ikwu otu ihe ahụ banyere ụgbọ ala ndị ọ na-eji na-agagharị n'okporo ámá nke West Yorkshire dị ka Leeds onye nchịkwa ọhụrụ.
Eziokwu Marcelo Bielsa:
Ihe anyị dere banyere onye njikwa ahụ agaghị ezu ezu ma ọ bụrụ na anyị emeghị ka ị mata gị ihe ndị a dị obere banyere ya.
Eziokwu # 1 - Okpukpe:
Bielsa bụ onye Katọlik na onye na-eme nke a. N’ezie, otu mgbe, ọ gara na nke Poor Clares nke Guernica, Spain, ka ya na nwunye ya gaa Ọktoba 2011, na-arịọ ha ka ha kpee ekpere maka ndị otu ya n’oge ahụ n’oge ha bụ Atletico Madrid Bilbao.
Eziokwu # 2 - Mmetụta:
You maara nke ọma na Bielsa nwere mmetụta na ịrị elu nke ọtụtụ ndị njikwa?
Ha gụnyere Mauricio Pochetinno- onye ọ kọrọ na ọ bịanyere aka mgbe ọ na-ehi ụra, Pep Guardiola onye na-akwanye ya ka onye nkuzi kacha Diego Simeone onye masịrị ya na nka.
Eziokwu # 3 - Ihe kpatara aha otutu:
Ọ bụghị ọtụtụ ndị na-amaghị ihe ọ bụla Aha aha Marcelo Bielsa El Loco sụgharịrị dị ka - Mad Man.
Enyere ya aha njirimara ahụ n'ihi nrubeisi obi ọjọọ ya iji merie egwuregwu na mmụọ nsọ na-enweghị isi mgbe ọ bụla ihe na-agaghị dị ka o zubere.
Eziokwu 4 - Trivia:
Ọ dị ịtụnanya ịmara na Bielsa na-ekerịta ụbọchị ọmụmụ ya na 1955 na ọbịbịa nke ọtụtụ ọrụaka ọrụ na ọmụmụ nke teknụzụ ndị mmadụ.
Ọ bụ na 1955 ka redio transistors akpa akpa dị na ya ebe US malitere iji ike Atomiki mbụ mepụtara n'otu afọ ahụ.
Ọ dị mkpa ka anyị chetara gị na 1955 bụ afọ ọmụmụ nke Bill Gates na Steve Jobs? Ee, anyị mere.
Eziokwu # 5 - Marcelo Bielsa's Salary Breakdown:
Arn nweta ego na dollar ($)
Kwa Afọ £ 8,000,000 € 8,878,000 $ 10,471,600
kwa ọnwa £ 666,666 € 739,833 $ 872,633
Kwa Izu £ 153,846 € 170,730 $ 201,376
Kwa .bọchị £ 21,917 € 24,323 $ 28,689
Kwa elekere £ 913 € 1,013 $ 1,195
Kwa Nkeji £ 15 € 17 $ 20
Kwa nke abụọ £ 0.25 € 0.3 $ 0.4
Nke a bụ ihe Marcelo Bielsa
eritela uru kemgbe ị malitere ilele ibe a.
Aha n'uju Marcelo Alberto Bielsa Caldera
aha otutu "EL Loco"
Ụbọchị ọmụmụ Bọchị 21 nke Julaị 1955
Ebe amụrụ onye Rosario na Argentina
Nna Rafael Pedro Bielsa
nne Aha ya bụ Lidia Caldera
Nwanne Rafael (nwanne) María Eugenia (nwanne)
Nwunye Laura Bracalenti kwuru
Children Ines na Mercedes (ụmụ nwanyị)
omume ntụrụndụ Gagharị, ịzụ ahịa, ịse foto na ndị fan, ịgụ na iso ezigbo ndị ezinụlọ na ndị enyi nọrịa
Ngwakọta Net ihe karịrị $ 1
Daalụ maka iwepụta oge iji gụọ edemede a gbasara ndụ nke otu n'ime ndị isi njikwa n'ụwa.
Na mkpokọta, akụkọ ndụ Marcelo Bielsa emeela ka anyị ghọta na nkwụsi ike na mkpebi siri ike bụ ihe ndabere nke ịga nke ọma.
Na Lifebogger anyị na-anya isi na anyị nyefee edetu (dị ka nke Bielsa) na izi ezi na izi ezi. Jiri obiọma hapụ nkọwa gị banyere onye njikwa nke Argentine.
IGIHE @ IGIHE
E kwesịkwara ịmara na ọ bụ nwoke na-eguzosi ike n’ezi ihe na nsọpụrụ.
Otu ihe atụ bụ mgbe ọ gwara Leeds United ka o kwe ka ndị mmegide nye akara mgbe ndị mmegide ahụ mere mkpesa na ihe mgbaru ọsọ nke Leeds gbara bụ 'enweghị nchekwube', na o mere nke a n'agbanyeghị na ebumnuche na-esite n'ọgba aghara mgbe mmegide ahụ nwụsịrị n'ụzọ doro anya.
Nkwenye a na ọ bụghị naanị ime ihe ziri ezi kamakwa ka a hụ ya ka ọ mee ihe ziri ezi na-egosi nguzosi ike n'ezi ihe nke Marcelo Bielsa, ezigbo nwoke
Emezi ikpeazụ ọnwa 10 gara aga site na BigAl_LBL